नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : जब पर्‍यो राती तब बुढी ताती भनेझैँ मात्र होइन असाध्यै रमाइलो पनि भयो यस पटक !
जब पर्‍यो राती तब बुढी ताती भनेझैँ मात्र होइन असाध्यै रमाइलो पनि भयो यस पटक !
– विकासराज न्यौपाने
धुर्मुसका बारेमा कुनैबेला छुट्टै सन्दर्भमा छुट्टै लेख्नेछु । तर यतिखेर चर्चा गर्न लागेको विषय भने अलिक फरक छ । अमेरिका आएपछि अधिकांश नेपालीले निजी जीवनमा त्यति ध्यान दिँदैनन् । बिहानदेखि रातिसम्म काममै जोतिनुपर्ने वाध्यताले गर्दा समय निकाल्न पनि साह«ै कठिन हुन्छ । आफ्नो समय निकाल्यो बच्चाहरुको मिल्दैन । अनि पतिको समय मिल्दा पत्नीको मिल्दैन । पत्नीको मिल्दा पतिको मिल्दैन ।
स्थान खोज्ने जिम्मा सञ्जयजी र मेरो भागमा प¥यो । एक बिहान हातमा ब्रोस्योर, नक्सा बोकेर म सञ्जयजी रामचन्द्र दाईको अपार्टमेन्टमा पस्यौँ । ‘ल, पिकनिकको लागि यो जोपुल लेक ठीक लाग्यो । नजिकै पनि छ । बोटिङ गर्न पनि पाइने रहेछ । ठाउँ गज्जबकै रहेछ,’ हामी दुबैले एकै स्वरमा ब्रिफिङ ग¥यौँ । तर बिहान सबेरै गएर ठाउँ नरोक्ने हो भने दिउँसो त पाइला राख्ने ठाउँ समेत नहुने रहेछ ।
‘अब यही ठाउँ कव्जा गर्नुपर्छ बुझ्नुभो रामचन्द्र दाइ,’ मैले भने । दिउँसो घाम चर्किएर साह्रै गर्मी हुन्छ । यहाँ रुखैरुख भएकोले सजिलो पनि हुन्छ भन्ने सोचेर सामान त्यही झारियो । नजिकै स्पेनिसहरुले मासु पोल्दैथिए । हामीले ६÷७ वटा गाडी समेत राख्न मिल्नेगरि ठाउँ कव्जा ग¥यौँ ।